အဆင့်အနည်းငယ်နှင့် YouTube channel များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း Gadget သတင်း
YouTube channel တစ်ခုကိုသင်ရယူလိုက်ပါကထိုနေရာမှသတင်းများကိုသာစောင့်မျှော်နေလိမ့်မည်၊ အရမ်းနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောသူမြားထံမှ။ ဤအခြေအနေကြောင့်လူအများကလမ်းရှာရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည် YouTube လိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ပါ သင်နှစ်သက်သလိုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုအင်တာနက် browser တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည့် plugins များသို့မဟုတ် add-ons များ၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်ဂူဂဲလ်သည်ဤအခြေအနေကို၎င်း၏သုံးစွဲသူများ၏အကျိုးအတွက်စဉ်းစားခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အင်တာနက် browser တွင်မဆို third-party application များတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ဘဲသာမန်လူတစ် ဦး ထံရောက်ရှိနိုင်သည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် YouTube ချန်နယ်တစ်ခုကိုပိတ်ထားပါ အကယ်၍ ၎င်းသည်အကြိမ်ကြိမ်အကြံပြုချက်များအဖြစ်ထင်မြင်သည်ဟုသင်ယူဆပါက၊ ဤဆောင်းပါးပါလှည့်ကွက်လေးတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ဤယူကျု့ချန်နယ်တစ်ခု (သို့မဟုတ်ထိုထက်မကများစွာ) ကိုပိတ်ဆို့ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပေါ်တယ်မှအကြံပြုချက်များတွင်မပေါ်လာတော့ပါ။
1 မလိုလားအပ်သော YouTube channel များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း
မလိုလားအပ်သော YouTube channel များကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း
အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုသင်မှတ်မိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်သင်တတ်နိုင်သလားပေါ်တွင်မူတည်သည် စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့် YouTube channel များကိုပိတ်ဆို့ပါ သို့မဟုတ်သင်မနှစ်မြို့ဖွယ်; ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောသူတို့၏အခြေအနေကိုဥပမာပေးသင့်သည်။
သင်၏ YouTube အကောင့်သို့ဝင်ပါ။
သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် YouTube ဗွီဒီယိုကိုရှာပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အဆင့်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ချင်သောဗီဒီယိုကိုမည်သူမည်ဝါ၏ YouTube ရုပ်သံလိုင်းပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ဤအရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှသည်« tab ကိုသွားပါ။အကွောငျး"။
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် အလံငယ်လေးကိုနှိပ်ပါ ၎င်းသည်«ပို့ရန်သတင်းပို့ရန်»ဆိုသောအံဆွဲ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
ရွေးစရာများဆက်တိုက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရလိမ့်မည် "block user" ကိုရွေးချယ်ပါ; သင်အကောင့်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းဗွီဒီယိုများနှင့် YouTube ရုပ်သံလိုင်းသည်အကြံပြုချက်များအဖြစ်ပေါ်လာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သေချာစွာသိရမည်ဖြစ်သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အချိန်ယူရလိမ့်မည်။
YouTube မှာအကြောင်းအရာအများကြီးရှိပေမယ့်အရာအားလုံးကိုကြိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ရှိလျှင် YouTuber အထူးသဖြင့်၎င်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းသို့မဟုတ်မကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ ၎င်းကိုသင်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ သင်၏ဗွီဒီယိုဖိုင်တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
တိကျသော YouTube ချန်နယ်တစ်ခုကိုလည်းမိဘထိန်းချုပ်မှုအပိုတစ်ခုအဖြစ်သင်ပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းမဆိုရုပ်သံလိုင်းရှိပါက မိသားစုလိုက် သို့သော်သင့်ကလေးအတွက်၎င်းကိုမနှစ်သက်ပါ၊ သင်နှင့်မသင့်တော်ဟုသင်ယူဆသော YouTube လမ်းကြောင်းများကိုအမြဲပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
သင်ဤရုပ်သံလိုင်းကိုပိတ်ပင်ခြင်းကို YouTube တွင်အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါသလားသို့မဟုတ်ထိုရုပ်သံလိုင်းမှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားရပ်တန့်ရန်မည်သည့်နည်းလမ်းများကိုသင်အသုံးပြုသနည်း။ YouTuber ဘာမကြိုက်လဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » YouTube လိုင်းများကိုပိတ်ပါ
ဒါဟာငါရှာနေတာပါ။ အမျိုးမျိုးသောမုန်းတီးမှုများရှိသည့်လုံးဝမခံနိုင်သောလူတစ်ယောက်ရှိသည်။ YouTube နဲ့အတူသူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Hector Hanibal Martinez ဟုသူကပြောသည်
အိုး၊ ငါတို့အတူတူပဲ၊ ငါ့ပြproblemနာကသူ့ကိုယ်သူ sesal လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပဲဆိုင်တာပါ
Héctor Hanibal Martinez အားပြန်ပြောပါ
ဟူဂို Garcia Sandoval ဟုသူကပြောသည်
ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ၆ နှစ်အရွယ်ကျွန်တော့်အစ်ကိုကတကယ့်ကိုမုန်းတီးတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့အကြောင်းပြောတာ။ သူကအဲဒီဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ကြည့်ချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာဖွေမည်နည်း၊ ရှာဖွေခြင်းသည်ရှာဖွေခြင်းတွင်ထွက်ပေါ်လာစေရန်၎င်းကိုငါမည်သို့အတိအကျပိတ်ဆို့ထားနိုင်မည်နည်း။
Hugo Garcia Sandoval သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ တောင်းပန်ပါတယ်…မင်းရဲ့ညီလေးကအဲဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်နိုင်တော့တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှာတွေ့သလား။ ငါနဲ့လည်းထပ်တူထပ်မျှဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ငါ့ ၆ နှစ်အရွယ်ညီလေးကသူ့အသက်အတွက်လုံးဝမကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုတွေပေါ်မလာဖို့လမ်းရှာလို့မရဘူး။
သင်ပြွန်သည်ယခုအချိန်တွင်ဂူဂဲလ် plerfiles များကိုသာပေးသည်၊ ထိုနည်းလမ်းသည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ၊
အကယ်၍ ငါ့တူကဖာနန်ဒofloo၏ဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်နေပြီးသူကငါ့ကိုပုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုပြောပြီးအရုပ်ဆိုးတယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊
ကောင်းသောည, ငါ့သမီးနှင့်အတူဖြစ်ပျက်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ပေမယ့်ငါညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပြီးသား, သင်လုပ်ဖို့ရှိသည်ပထမ ဦး ဆုံးအရာသင်ပိတ်ဆို့ချင်သောလိုင်းရိုက်ထည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီဟာငါပိတ်ပင်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာပါ
မူလစာမျက်နှာဗီဒီယိုများ Playlists Channels Comments နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ
ပျော်ရွှင်ဖွယ်အလံသည်မပေါ်လာပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုလည်းပိတ်ဆို့ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၉ နှစ်အရွယ်သားသည်သူ၏အသက်အရွယ်နှင့်မသင့်တော်ဟုထင်ရသောဗီဒီယိုအချို့ကိုတွေ့ရသည်။ ?? ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အလံပေါ်လာစေရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံး YouTube ၌ session တစ်ခုဖွင့်ရမည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကန့်သတ်ထားသော mode ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင် YouTube စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးသို့သွားရန်၊ ကန့်သတ်ထားသော mode box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပြီး၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်။ (လိင်၊ ရိုင်းစိုင်းသောဝေါဟာရစသည်) ။
ဒီနိမ့်ကျတဲ့ကောင်လေးကိုငါတားဆီးဖို့အတွက်ငါဟာ ၉ နှစ်အရွယ်သားလေးဟာသူ့ဘ ၀ မှာအချိန်တွေကုန်လွန်စေခဲ့တယ်၊
HELLO ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကငါပြီးသားငါအသုံးပြုသူပိတ်ဆို့သောငါအသုံးပြုသူကိုပိတ်ဆို့သောငါမတိုင်မှီငါ၏အငယ်ရွယ်သော OSEA များအတွက်ပေါ်ထွက်လာဖို့လျှောက်ထားချင်တယ်ငါမဖွင့်ပါနဲ့ဒီနေရာမှာငါမမြင်လိုကြောင်း, ငါခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်နားလည်သဘောပေါက် မည်သည့်အချိန်မဆိုသူတို့ဆက်လက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အိုင်အိုအူဘူူ့သည်အရွယ်မရောက်သေးသောအရွယ်ရောက်သူများ၏မိန်ကလေးမိဘများအားကူညီခြင်းတွင်စွယ်စုံကျမ်းမှအန္တရာယ်ရှိသောချန်နယ်များကိုကူညီရန် ....
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် kanal တစ်ခုကိုပိတ်ဆို့ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုသိရှိပါက၊ ကလေးငယ်များအားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဤကောင်လေးအားဖြင့်အချိန်ကာလကြောင့်သွားခြင်းသည် TRSITE သည် TRSITE သည်ကလေးသူငယ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဤကောင်လေးကိုသတိပြုပါ၊ ကလေးငယ်များသည်ကလေးငယ်များ၊ ၎င်းကိုမြင်ခွင့်မပေးသော်လည်းကန့်သတ်ချက်သည်အလွန်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်အချိန်အတွက်၊ သို့သော်သင့်အသက်အရွယ်၏ကလေးသူငယ်များအားလုံးထိုအရာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသောအချိန်သည်ရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဤပြCHနာသည်ယခုအချိန်အထိ MR အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်မှာလူတ ဦး ကလူသားလေးစားမှု၏အမှန်တကယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချထားလိမ့်မည် ????
လူတချို့ရဲ့မှတ်ချက်များကိုဖယ်ထုတ်ဖို့တစ်ခုခု။ သူဟာလူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူယုံကြည်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော့်ကိုးနှစ်အရွယ်သားလေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကလေးငယ်တွေကိုဒီဗီဒီယိုကိုသီးသန့်မထားရင်တောင်မှလူတွေဆီကနေပေါ်ထွက်လာတာပါ။ "Panda ပျော်ရွှင်သည်", ငါ့ဂေးငါ့သားကိုကုသနှင့်သူ့ကို SCROTUS ပြသရန်သူ့ကိုတောင်းဆိုသကဲ့သို့ငါမှတ်ချက်များကိုသာဖတ်ပါ, သို့သော်နှစ် ဦး စလုံးမှဖယ်ရှားပစ်ရမယ်လူတွေကို YOUTUBE မှ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ၎င်းသည်ပိတ်ထားပြီးသားဖြစ်သော်လည်း YouTube သည်ကျွန်ုပ်၏သားအားဤမကျန်းမမာသောဗီဒီယိုများကို ဆက်၍ ပေးနေသည်။
Shanon abella ဟုသူကပြောသည်
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကျန်းမာသောဗွီဒီယိုများကိုကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်သို့ရောက်သောသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်စကားဝှက်ထည့်ထားသောအင်တာနက်ကိုအဆက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Shanon abella အားပြန်ကြားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်၊ PlayStation3ဂိမ်းစက်မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ အိမ်မှာအဲ့ဒီကိုပြန်သုံးသပ်လိမ့်မယ်။ The Annoying Orange ရုပ်သံလိုင်းကကျွန်တော့်ကိုတိုက်ခန်းတွေရှိတယ်။ ဂိမ်းတွေပေါ့။ သူတို့ကအရမ်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ငါ့ ၃ နှစ်အရွယ်သားကအကြံပေးတာကိုကြည့်တယ်။ အခုသူတို့မပေါ်လာဘူးလို့မျှော်လင့်တယ်။
ငါရှာဖွေပြီးရှာဖွေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကို firewall မှလုံးဝပိတ်ဆို့လိုက်သည်။ YouTube သည်ဝံများအော်ဟစ်သံများနှင့်ဆူညံအော်ဟစ်သံများနှင့်တီးခတ်နေသည့်အသံများနှင့်ပြည့်နေခြင်းကြောင့် ၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သည်။
ကစားစရာများဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ သတ္တုတွင်းလုပ်ခြင်း၊ အမှားများကိုစားခြင်း၊ လူရွှင်တော်၊ ပိုမိုသတ္တုတွင်းလုပ်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားထူးခြားစွာခံစားစေပြီးဝေါဟာရများနှင့်နည်းနည်းပါးပါးနည်းနည်းပါးပါးခြစ်ရန်နည်းလမ်းများကိုသင်ပေးသည်။
Alexis Arroyo နေရာချထားပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Alexis Arroyo အားပြန်ပြောပါ
ရောဘတ် Cunningham Madrigal ဟုသူကပြောသည်
ဒီယောက်ျားတွေရဲ့ချန်နယ်တွေကိုလည်းငါပိတ်ထားရမယ်၊ သူတို့ကအရမ်းညစ်ပတ်တယ်။ သူတို့ကအမြဲလိုလိုမုန်းတီးစိတ်နဲ့ပြောနေကြတာ။ သူကသူတို့ကိုဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနေတာကိုမြင်တော့ပုံမှန်လို့ထင်နေတယ်။ android အပေါ်မည်ကဲ့သို့ပိတ်ဆို့ရမည်ကိုမည်သူမဆိုသိပါကကျွန်ုပ်အားအကြောင်းကြားပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Robert Cunningham Madrigal အားပြန်ကြားပါ
Paula Castaneda ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကလေးများအား Google Chrome: videoblocker တွင် extension ကိုအသုံးပြုခြင်းအားမမြင်စေလိုသောလမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက် YouTube သို့သွားပြီးသူတို့မမြင်လိုသည့်ချန်နယ်ကိုရှာဖွေသည်၊ channel ၏အမည်ပေါ်ရှိ mouse ကိုညာဘက် နှိပ်၍ "ဒီချန်နယ်မှဗီဒီယိုများပိတ်ဆို့ခြင်း" ဆိုသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ။ ငါနင့်ကိုအစေခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် တကယ်ကိုငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် ..
သင့်ကိုနောက်ထပ်အကူအညီပေးရန်၊ မှတ်သားရန်၊ သင်၏ router ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုရယူရန်ကြိုးစားပါ၊ အပိုဆုံး ROUTERS တွင်ပါ ၀ င်သောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်၊ CHANNEL NAME ကိုပိတ်ဆို့ပြီးရုပ်မြင်သံကြားတိုင်းသူတို့၏စက်ကိရိယာများပေါ်တွင်မမြင်နိုင်ပါ။
စိတ်ဝင်စားဖို့၊ ကန့်သတ်ထားသော mode မရှိပဲလိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ် fernanfloo နှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာမရှိပါ chrome) ဒါပေမယ့် router ကနေပိတ်ဆို့ ?? ငါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါသတိပြုမိသည်။ Hosts ဖိုင်မှသင်မတတ်နိုင်။ Windows firewall မှ YouTube နှစ်ခုလုံးကိုအမြဲတမ်းပိတ်ဆို့နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
sasselandia အလုပ်မလုပ်ပါဘူးအဲဒါကိုပိတ်ဆို့ပါဘူးငါမသိ youtuber ပိတ်ဆို့ပေမယ့် sasselandia ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမသိ?
ဒီနည်းလမ်းကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါ့အပြင်၊ သင်ဟာဘယ် YouTube ရုပ်သံလိုင်းကိုမှပိတ်ဆို့လို့မရဘူး၊ မှတ်ချက်များကိုသာပိတ်ထားတယ်၊ နောက်ထပ်ဘာမှမရှိဘူး၊ ငါက Google အတွက်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်၊ ပိတ်ထားတဲ့ YouTube channel ကအသုံးပြုသူမမြင်တဲ့ကြော်ငြာ၊ ကြော်ငြာကပိုက်ဆံဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Google ကသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်ဘူး၊ ကျန်တဲ့တစ်သက်လုံးအတွက်ငါဝမ်းမြောက်စွာပိတ်ဆို့ထားသောအကြောင်းအရာများနှင့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်၊ သို့သော်လက်ရှိအကြောင်းအရာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်လက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
Andrew COSTA ဟုသူကပြောသည်
YOUTUBE က“ VISUALPOLITIK” လို့ခေါ်တဲ့မိုက်မဲသောရုပ်သံလိုင်းကိုစပိန်ပိုင်ရှင်တွေက LAMECULOS ကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိုင်ပီကိုပိတ်ဆို့မထားပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လုပ်ခြင်း၊ GOOGLE သည်ဤချန်နယ်များကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဟုထင်ရသည်။ ၎င်းတို့သည်လက်ဝဲချန်နယ်များအားပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုခြင်းမပြုပါ။
ANDRES COSTA မှစာပြန်ရန်
iPod Nano နှင့် Shuffle တို့သက်တမ်းရှည်စွာနေထိုင်ပါက Apple သည်သူတို့ကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
Meizu PRO 7: မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းနှင့်မလုံလောက်လျှင်နှစ်ခုယူပါ